काेभिडलाई मजाक सम्झिए तत्काल ज्यान जान्छ – NawalpurTimes.com
काेभिडलाई मजाक सम्झिए तत्काल ज्यान जान्छ
प्रकाशित : २०७७ कार्तिक २८ गते ११:०९
सालिकराम काेइराला/रजहर ,नवलपुर
विश्वव्यापी माहामारीकाे रूपमा फैलिएको काेभिड १९ (काेराेना भाईरस) संक्रमितले थाेरै हेल्चेक्र्याईं गरे तत्काल ज्यान जानसक्ने रहेछ । बेलैमा सुरक्षा सतर्कता नअपनाउने हाे भने संक्रमितकाे त ज्यान गयाे,गयाे उसले थुप्रैलाई धरापमा पार्छ र समाजलाई अन्धकारतर्फ धकेल्छ। हामीले काेभिडलाई याे मृत्युको खतरनाक कालाे बादल हाे भन्ने बुझेनम् भने बास् सकियाे । यसले मानवीय क्षति पुर्याएरै छाड्छ ।
१७ कार्तिक अपरान्हतिर म एउटा मिटिङमा थिएँ । मलाई अचानक जीउ तातेजस्ताे अनुभव भयाे । मिटिङ सकेर साधारण चाउमिन खाजा खाएँ । अलिकति खाएँ, बाँकी छाडिदिएँ । खान मन लागेन । त्यसपछि घर गएँ । हल्का चक्कर लागेजस्ताेभाे । बेलुका प्राय: खाना नखाने आदत भएका कारण खाना खाईन । जीउ थाकेजस्ताे भाथ्याे । सधै राती ११ बजेपछि सुत्ने मान्छे त्याे दिन सबेरै सुतें । सुतेकाे केहिबेरमा छातीमा पीडा भयाे । जाडाे लागेपनि मच्छेडले गीत गाउन छाडेकाे थिएन । त्यसैले सुपानेट झुल लगाएँ र पलङमा एक्लै सुतेकाे थिएँ । रात छिप्पिदै जाँदा छाती दुख्ने क्रमपनि बढ्दै गयाे । ११ बजे पछि एक झिमिक निदाउन सकिन । रातभरि आत्तिएर १७ पटक जति ट्वाईलेट गएँ । कतिखेर उज्यालाे हाेला जस्ताे भयाे । राती जतिसुकै पीडा भएपनि कसैलाई नजिक पर्न दिईन । भाेलिपल्ट उज्यालाे हुनासाथ सखारै पानी उमाल्न लगाएर मजाले बाफ लिएँ । थाेरै हल्का महशुस भयाे । बिहानकाे खाना रूचेन । काेराेना ग्रुपमा ” फिलिङ इलिनेस् चेस्टपेन टु नाईट” भन्ने म्यासेज छाडें । दिउँसाे जीउ दुख्न थाल्याे । बान्ता हाेला,हाेला जस्ताे हुने तर नहुने । हैरान गरायाे । कैयाैंपाली बान्ता हाेला जस्ताे गरेर शिथिल बनायाे । जीउ दुखेकाे छ ज्वराे र खाेकी भने छैन । छाती मन्द गतिमै दु:खेकाे थियाे । आज राती पनि छाती दुख्छ कि भन्ने डरले जिल्ला अस्पतालमा आइसीयु छ कि छैन भनेर साेधें । हस्पिटलमा आइसीयु खाली छ । पाईन्छ भनेपछि बल्ल ढुक्क भएँ । राती दुख्याे भने जतिबेला दुख्ला त्यतिबेलै जाउँला भनेर सुत्नुअघि बाफ लिएर सुतें । सुतेकाे एकछिनपछि टाउकाे दुख्न थाल्याे । यति दुख्याे कि भनिंसाध्य छैन । रातभर छट्पटी भयाे दाेस्राे रातपनि झिमिक्क निदाउन सकिएन । बिहान भएसी पानीमा भिक्स मिसाएर बाफ लिएँ । बाफपछि एकछिन रिलिफभाे । खाना खान बसें, कुनै स्वाद र गन्धै छैन । खानापछि एउटा सुन्तला खाएँ । सुन्तला हाे कि काँक्राे हाे रस त छ स्वाद कुनचरिकाे नाम हाे मेसै पाईएन। दुबै खुट्टाकाे घुँडाबाट मुनीकाे छाला अरठ्ठाे भएर मजाले दुख्याे । घरि,घरि बिनामेसै बाउँडिन्थ्याे । अपरान्ह पख मैले निश्कर्ष निंकालें । मलाई काेराेनानै भएकै हाे भनेर ।
हिजैबाट घरैमा सेल्फ आइसाेलेटेड भएर बसेकाे थिएँ । तेस्राे रात मन्द,मन्द टाउकाे दु:खेपनि निंदाएँ । बिहान बाफ लिएँ र ताताे पानीले नुहाएँ । खान जात् रूचेकाे छैन । कच्याउ,कच्याउ गरेर थाेरै खाना खाएँ । अलिकति दाल पनि पिएँ । एकछिनमै वान्ता हाेला जस्ताेभाे । दिउँसभरि घरकाे छतमा बसेर समय बिताएँ । आधि राेटी खाएँ । चाैथाे रात पनि हल्का पीडा सहित बिताएँ । पाँचाै दिन काेराेना परिक्षणकाे लागि स्वाब दिन पर्याे भनेर जिल्ला स्वास्थ्यका केशव चापागाईंलाई फाेनगरें । उनले अर्कैकाे नम्बर दिए । त्यसपछि हुप्सेकाेटमा आशिष रेग्मीलाई फाेन गरेर फिक्स गरें । भाेलिपल्ट स्वाव दिन जाने बेलामा नवलपुर उवासंघका अध्यक्ष डासुराज पाेखरेलले फाेन गरेर जिल्ला अस्पतालमै स्वाव दिनु भने शरीर शिथिल भएकाे थियाे । स्वाव दिएर आएपछि पनि आइसाेलेटेडनै भएर बसें । अब रिपोर्टकाे पर्खाई थियाे ।
यस बिचमा प्राकृतिक चिकित्सालय रजहरका डा. विनाेद पाैडेल र ब्यबस्थापक हरि सापकाेटासँग पटक,पटक कुरा भैसकेकाे थियाे । स्वाव दिएकाे पर्सीपल्ट जिल्ला अस्पतालबाट फाेन आयाे । माईण्ड मेकअप भैसकेका कारण पाेजेटिभ भएकाे फाेन आउँदा पनि कुनै फिलिङस् भएन ।
कान्छाे छाेराेले बेला,बेलामा बाबालाई के भाकाे हाे ? भनेंर ममीसँग गुनासाे गरिहन्थ्याे । रिपोर्ट राम्राे आईदिए हुन्थ्याे बाबाकाे भनेंर घरि-घरि भनिरहन्थ्याे । उसले केही मेसै पाउन सकेकाे थिएन । बाबाले मलाई किन नजिक पर्न नदिएकाे हाेला भनेर उ अक्क न बक्क थियाे । मिसेसकाे नतिजा नेगेटिभ आएपछि म रजहर जाने निधाेगरें र कावासाेती नगरपालिकाकि मेयर चन्द्रा पुनलाई जानकारी गराएँ । पत्रकार महासंघ र “सत्य कलम” टिमलाई पनि जानकारी गराएँ । भाेलिपल्ट विहान खाना खाईओरी झाेला बाेकेर बाईकमा प्राकृतिक चिकित्सालय रजहरमा रहेकाे काेभिड अस्थायी अस्पताल काे आइसाेलेशनमा आएँ ।
( लेखक नवलपरासीमा रहेर लामो समय देखी पत्रकारिता गर्दै आएका छ्न , उनी सत्यकलम अनलाइन र सत्यकलम साप्ताहिकका सम्पादक हुन ।)